Munharaunda yanhasi, kukosha kwekuteerera kwave kuwedzera kukosha. Kuteerana kunotora kubva muchiito cheChirungu 'kutevedzera' uye zvinoreva 'teerera kana kugara'. Kubva pakuona zviri pamutemo, kutevedza zvinoreva kutevedzera mitemo nemirau inoshanda. Izvi zvakakosha kwazvo kune yega kambani uye institution. Kana iyo inoshanda mirau nemirau ikasateedzerwa, matanho anogona kumisikidzwa nehurumende.
UNODA KUSHAYA BHAIBHERI?
> Mutemo wezvakavanzika
Munharaunda yanhasi, kukosha kwekuteerera kwave kuwedzera kukosha. Kuteerana kunotora kubva muchiito cheChirungu 'kutevedzera' uye zvinoreva 'teerera kana kugara'. Kubva pakuona zviri pamutemo, kutevedza zvinoreva kutevedzera mitemo nemirau inoshanda. Izvi zvakakosha kwazvo kune yega kambani uye institution. Kana iyo inoshanda mirau nemirau ikasateedzerwa, matanho anogona kumisikidzwa nehurumende. Izvi zvinosiyana kubva pakubhadharisa faindi kana mubhadharo wechirango kubvisirwa rezenisi kana kutanga kuferefetwa kwematsotsi. Kunyangwe kutevedza kunogona kuenderana nemitemo yese zviripo nemitemo, mumakore achangopfuura kuteedzera kwakanyanya kuita basa mumutemo wezvemari nemutemo wepachivande.
Kubvumirana mukati memutemo wekuvanzika kwawedzera kukosha mumakore achangopfuura. Izvi zvinonyanya kukonzerwa neGeneral Data Protection Regulation (GDPR), iyo yakatanga kushanda musi wa25 Chivabvu 2018. Kubva pamutemo uyu, masangano anofanirwa kutevedzera mitemo yakaoma uye vagari vane mvumo yakawanda nezve data ravo. Muchidimbu, GDPR inoshanda kana data rako pachako rakagadziriswa nesangano.
Dhata remunhu rinoreva chero ruzivo rwune hukama neanozivikanwa kana kuzivikanwa munhu chaiye. Izvi zvinoreva kuti ruzivo urwu runoenderana zvakananga kune mumwe munhu kana runogona kurondwa rwakananga kune iye munhu. Anenge masangano ese anofanirwa kubata nekugadziriswa kwe data rako rega. Izvi zvatova zvakadaro, semuenzaniso, apo manejimendi manejimendi akagadziriswa kana kana data revatengi rikachengetwa. Izvi zvinodaro nekuti kugadziriswa kwe data rako pachako kunetsekana vese vatengi uye nekambani pachezvayo vashandi. Zvakare, chisungo chekuteerera GDPR chinoshanda kumakambani pamwe nemasangano enharaunda akaita semitambo yemakirabhu kana nheyo.
Chikero cheGDPR saka chiri kure kwazvo kusvika. Iyo Yega Dhairemendi Chiremera isangano rekutarisva ine chekuita maererano nekutevera neGDPR. Kana iyo sangano isingateereri, iyo Dhipatimendi reDatha reChisimba rinogona kumisikidza faindi, pakati pezvimwe zvinhu. Aya mafaindi anogona kumhanya achienda kuzviuru zvemadhora. Kubvumirana neGDPR saka kwakakosha pasangano rega rega.